Qodobada Been-abuurka ku Ah Diinta Islaamka Ee Lagu Helay Haweenay Maxkamadda Degmada Hargeysa Xun ku Riday | Qodaal News
Qodobada Been-abuurka ku Ah Diinta Islaamka Ee Lagu Helay Haweenay Maxkamadda Degmada Hargeysa Xun ku Riday
Maxkamadda Degmada Hargeysa, ayaa xukun ku riday haweenay u dhalatay dalka Soomaaliya oo lagu helay hawlo khalkhalgelin diinta Islaamka ah oo ay ka waday caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Gabadh magaceeda la yidhaa Sacdiya Sheekh Yuusuf Wardheere oo da’deedu 40 sanno jir tahay, ayey Maxkamadda Degmada Hargeysa ku riday xukun isugu jira xadhig, ganaax lacageed iyo mastaafurin, kadib markii lagu helay inay faafinaysay mabaadi’ aan ku jirin diinta Islaamka.
Fadhi Maxkamaddu ka yeelatay kiiskan shalay, kaas oo u furnaa warbaahinta iyo dadweynahaba, ayaa lagu soo bandhigay eedaymaha lagu soo oogay haweenaydan oo ay ka mid yihiin, khaladaad ay ka sheegtay sifooyinkii waxyigu ugu soo degi jiray Nebi Muxamed (NNKHA) iyo mabaadi’ xagjirnimo ka soo horjeeda diinta Islaamka oo ay ku xaaraantinimaysay waxyaabo ka mid ah hab-nololeedka bulshada, kuwaas oo ay bari jirtay dumar ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Guddoomiyaha Maxkamadda Degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Beer-geel oo isagu garsoore ka ahaa kiiskan, ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha khaladaad ku ah diinta Islaamka ee gabadhan lagu eedeeyey, waxaannu yidhi, “Gabadhan waxa lagu soo eedeeyey 31-kii bishii August 2015, in lagu soo qabtay xaafadda Guryo-samo ee degmada Maxamuud Haybe iyadoo si khaldan ugu dhigaysa dumar diinta Islaamka, waxaanna ka mid ahaa waxyaabihii ay u sheegtay dumarkaas ee lagu soo eedeeyey, ‘marka uu Malakul Jibriil u keenayo waxyiga Nebi Muxamed waxa uu isku soo shabbihi jiray muuqaalkii Caasha (Xaaskii Nebiga).
Waxa kaloo lagu soo eedeeyey inay tidhi munaasibadaha Ciidda ayaan lala tukan dadweynaha, iyadoo sidaasna ku khalkhalgelisay haween degan xaafadda Maxamuud Haybe ee ka mid ah magaalada Hargeysa, iskana horkeentay qoysas ku dhaqnaa caasimadda.
Sidoo kale, waxa lagu soo eedeeyey in ay tidhi mushaharka dawladdu waa xaaraan. Waxa kaloo ay tidhi carruurta yaan la gayn cusbitaallada.”
Guddoomiye Beer-geel waxa uu sheegay in dambigaasi maxkamadda horteeda kaga caddaaday Sacdiya Sheekh Yuusuf Wardheere, kadib markii ay qiratay qayb ka mid ah dambiga ay gashay, isla markaana ay ku markhaati fureen culimo ka mid ah Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta iyo xubno ka tirsan ardaydii ay waxbaraysay. Sidaasi darteedna maxkamaddu ku xukuntay xadhig hal sanno ah, ganaax lacageed oo hal milyan oo shillinka Somaliland ah iyo weliba in marka xukunkeedu dhammaado loo mastaafuriyo dalkeeda Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Cadaado oo ay sheegtay inay u dhalatay, iyadoo aan wax racfaan ah laga qaadan karin xukunkan, maadaama eedaysanuhu qiratay.
“Tani waa abaalmarin dambiilay khalkhalgelisay arrimaha diiniga ah, si loo ilaaliyo diinta Islaamka iyo Caqiidada dadweynaha ku dhaqan Jamhuuriyadda Somaliland oo qofna aannu u khalkhalgelin shacabka isagoo qaab diineed isku soo eekaysiiyey oo u soo qaatay dharkii Islaamka, uguna soo marmarsooday inuu diin barayo dadka, isagoo aaminsan afkaar khaldan oo aan ku caddayn diinta,” ayuu yidhi Garsoore Cabdirashiid Beer-geel.